Home News Farmaajo oo ka codsaday beesha uu ka dhashay Qalbi-Dhagax in ay ku...
Farmaajo oo ka codsaday beesha uu ka dhashay Qalbi-Dhagax in ay ku qanciyaan in uu aqbalo magdhow dowlada Soomaaliya siiso
Warar hoose oo lagu kalsoon yahay oo ay heshay shabakada Muqadishu Online ayaa sheegaya in Madaxweyne Farmaajo ka codsaday beesha uu ka dhashay in lala heshiisiiyo Cabdikarin Shiikh Qalbi-Dhagax. Farmaajo ayaa fariintaas u mariyay qaar ka mida qiyaska uu ka dhashay Qalbi-Dhagax. Farmaajo ayaa balan qaaday in lacag magdhow ah la siin doono halyay Qalbdi Dhagax. Mid ka mida dadka ku dhaw-dhaw Qalbi Dhagax ayaa sheegay in Farmaajo wax ka qaldan yihiin. Waxa ii yiri waxa uu ku fakarayaa in uu lacag ku iibsado Qalbdi Dhagax. waxa uu yiri “waxa uusanba aqoonin Qalbi Dhagax , waa ninkii ka diiday dowlada Itoobiya in baasaboor Itoobiyaan ah ku dhoofo, waa ninkii Addis Abbaba dhexdeeda ku sheegay in uu rabo in shanta Soomaali la isku keeno”.
Previous articleAntonio Guterres oo kusii jeedda Xeryaha ay ku sugan yihiin Rohingya
Next articleRw ku xiigeyn hore ahna Xildhibaan Qaran oo Farmaajo iyo Khayre Eedeyn kulul ujeediyay
Ciidanka NISA oo lagu laayey Dagaal xoog leh oo ay la...